Nchịkọta nkenke nke "akụkọ ihe mere eme nke steepụ" nke Antonio Buero Vallejo | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Encarni Arcoya | | Genres, Akwụkwọ, Aterlọ ihe nkiri
Na ọrụ nke Antonio Buero Vallejo ihe oyiyi, «Akụkọ banyere steepụ», ọgbọ atọ bi n'otu ụlọ ahụ ka akwadoro iji gosipụta mmekọrịta ọha na eze na ịdị adị na ndụ Spanish na ọkara mbụ nke narị afọ XNUMX. Nrịgo elu ahụ, oghere mechiri emechi na nke ihe atụ, na oge anaghị echefu ihu ọma na-akwado usoro cyclic na ugboro ugboro nke na-egosi ọdịda nke ndị odide ahụ.
1 Mee otu
2 Mee ihe abụọ
3 Mee ihe atọ
4 Nkọwa nke «Akụkọ banyere ubube»
5 Isi okwu nke Akụkọ nke ubube
6 Ndị a kọrọ akụkọ ha na Akụkọ banyere ubube
6.1 Ọgbọ izizi Akụkọ banyere ubube
6.2 Ọgbọ nke abụọ
6.3 Ọgbọ nke atọ Akụkọ banyere ubube
7 Ọdịdị nke akụkọ ahụ
7.1 Okwu Mmalite
7.2 Dị Ọtọ
8 Ihe ọkwa ahụ pụtara
9 Okwu Antonio Buero Vallejo kwuru
Omume izizi mere n'otu ụbọchị na 1919. Carmina na Fernando, ndị na-eto eto abụọ bi na obere ụlọ, na-ezukọ na ọdịda ma ọ bụ "casinillo" nke steepụ ahụ.
Mee ihe abụọ
Omume nke abụọ ga-eme afọ iri ka e mesịrị. Urbano gwara Carmina ka o were ya dị ka di ya. Elvira na Fernando alụọla di na nwunye.
Mee ihe atọ
Omume nke atọ a mere na 1949, afọ a wepụtara egwuregwu ahụ. Fernando, nwa Elvira na Fernando, na Carmina, ada Urbano na Carmina, nwere ịhụnanya, mana ndị mụrụ ha machibidoro mmekọrịta a n'ihi iwe na nkụda mmụọ nke ọdịda ha kpatara.
Nkọwa nke «Akụkọ banyere ubube»
«Akụkọ banyere steepụ» bụ egwuregwu (1947 na 1948) nke Antonio Buero Vallejo dere, nke ọ natara Lope de Vega Nrite. Ọ malitere na Spanish aterlọ ihe nkiri dị na Madrid na Ọktoba 14, 1949. N'ime ya, a na-enyocha ọha mmadụ na ụgha ya niile site na mpaghara otu akwa ọkwa.
Isi okwu nke Akụkọ nke ubube
Akụkọ banyere ubube na-akọ akụkọ banyere ọtụtụ ndị dara ogbenye na n'ọgbọ ha niile, na-aga n'ihu na-echekwa ọnọdụ ahụ, agbanyeghị na ha chọrọ ịpụ. Otú ọ dị, ha achọpụtaghị ụzọ ha ga-esi nọrọ n'ọnọdụ ha na nke ahụ na-ebute iwe, anyaụfụ, ụgha, iwe ... n’etiti ndị agbata obi niile na steepụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ha kwụpụta.
N'ihi ya, Antonio Vallejo na-egosi anyị ka obi nkoropụ, ịchọrọ ịpụ iche na ndị ọzọ, na ịgba mgba na klaasị dị ala n’enwetaghị ụgwọ ọrụ ọ na-emebi mmadụ, na-eme ya obi ilu ma na-eme ihe ọjọọ niile dị n'ime mmadụ na-eme nke ọma.
Storiesfọdụ akụkọ pụtara nke nwere ike bụrụ ezi ngosipụta nke ọha mmadụ, dịka Fernando, onye dịka onye na-eto eto rọrọ nrọ na ya ga-abụ ọkaibe na ọgaranya; ma n'agbanyeghị nke ahụ, ka ọtụtụ afọ na-aga, a hụrụ na ọ nọgidere na-ebi n'ụlọ ahụ ma bụrụkwa ogbenye.
N’ụzọ ụfọdụ, onye edemede ahụ gosiri na agụmakwụkwọ na ụzọ e si emeso ụmụaka na-emetụta ha ịmeghachi otu ihe ahụ na-egbochi ha ịda ogbenye ahụ.
Ndị a kọrọ akụkọ ha na Akụkọ banyere ubube
Dị ka a pụrụ ịhụ site n'elu, Historia de una escala adịghị elekwasị anya naanị n'otu oge, kama gbasara ọgbọ atọ nke ezinụlọ dị iche iche na otu ha si esi puta iche. Yabụ, enwere ọtụtụ odide, mana nke ọ bụla kwekọrọ n'ọgbọ. N'okwu a, anyị na-ekwu maka:
Ọgbọ izizi Akụkọ banyere ubube
N'ime ya ihe odide bụ:
Don Manuel: Ọ bụ ọgaranya bara ụba na-ebi n'ebe ahụ mana, n'adịghị ka ndị ọzọ, ọ chọrọ iji ego o nwere nyere ndị agbata obi ya aka. "Anya aka nri" ya bụ nwa ya nwanyị bụ Elvira, nsogbu bụ na nke a bụ nwa agbọghọ na-adọrọ adọrọ bụ onye, ​​ebe ọ bara ọgaranya, amataghị ihe dị mkpa n'ezie.
Obiọma Doña (Asuncion): Ọ bụ nne Fernando, nwanyị na-eme ihe ọ bụla o nwere ike ime ka nwa ya nwee obi ụtọ. Ọtụtụ na-eche na ọ bara ọgaranya, mana n'eziokwu ọ bụ onye kasị daa ogbenye na ebe ahụ.
Bale: Ọ bụ nne nke ụmụ atọ, Trini, Urbano na Rosa. Di ya bụ Maazị Juan na ọ bụ nwanyị nwere ikike ọchịchị nke na-enwe mmasị ijide ụmụ ya n'ọchịchị.
Gregory: Ọ bụ nna Carmina na Pepe, mana ọ gafere ma mee ka ezinụlọ ahụ nọrọ n'ọnọdụ dị mwute.
Na-emesapụ aka: Ọ bụ nwunye Gregorio, nwanyị di ya nwụrụ na mwute nke ọnwụ di ya. N'agbanyeghị na o nwere ụmụ abụọ, ihe kasị amasị ya bụ nwa agbọghọ ahụ.
Ọgbọ nke abụọ
Na ọgbọ nke abụọ, ọtụtụ afọ agafeela ma ụmụaka a hụrụ na nke mbụ toro. Ugbu a ha bụ ụmụaka toro eto na-amalite ije ije naanị ha. Yabụ, anyị nwere:
Fernando: N'ịhụnanya Carmina. Agbanyeghị, n'ịchọ ịbụ onye ọzọ, na kama ikpebi maka obi ya, ọ na-eme ya maka ego ahụ, ya mere ọ lụrụ Elvira. Nke ahụ na-eme, mgbe obere oge gasịrị, ọ na-etu ọnụ, umengwụ ... ma tufuo echiche efu ibi. Ọ nwekwara ụmụ abụọ, Fernando na Manolín.
Carmine: Carmina malitere dị ka nwa agbọghọ ihere nke na-achọghị ka onye ọ bụla tụkwasị ya obi. Ọ hụrụ Fernando n'anya, ma n'ikpeazụ ọ lụrụ Urbano. O nwere nwa nwanyi aha ya.
Elvira: Elvira tolitere n'agbata agụụ na ego, n'ihi ya ọ dịbeghị ihe ọ bụla kọrọ ya. Otú ọ dị, ọ na-enwere anyaụfụ n'ihe Carmina nwere.
Urbano: Ekwenyere na ọ dị mma n'ihe niile nakwa na ọ nwere ike ịdị elu karịa ndị ọzọ n'ihi na ọ maara karịa. Ọ dị obi ọjọọ, mana ọ na-arụsi ọrụ ike, na-enwe ezi uche na mgbe ọ bụla o nwere ike ọ na-anwa inyere aka.
pepe: Nwanne Carmina. Ọ bụ nwoke nke, ka ndụ na-aga, ọ na-ewe iwe karịa ma na-eri ya. N'ikpeazụ, n'agbanyeghị na ọ lụrụla Rosa, ọ bụ nwanyị na-a womụbiga mmanya ókè na onye aholicụrụma.
Rosa: Ọ bụ nwanne Urbano. Ọ lụrụ Pepe na alụmdi na nwunye ya na-eduga ya na ndụ nhụsianya, nke ha na-anwụ na ndụ.
Atọ n'Ime Otu: Ọ nọ n’alụghị di ma ọ bụ nwunye n’agbanyeghị na ọ mara mma ma dịkwa mma n’anya ndị ọzọ.
Ọgbọ nke atọ Akụkọ banyere ubube
N'ikpeazụ, ọgbọ nke atọ gosipụtara anyị ihe odide atọ, bụ ndị na-enwetụworị ọhụụ na nke gara aga:
Fernando: Nwa Elvira na Fernando, nke yiri nna ya na mma, nzuzu, gigolo, wdg. Ọ hụrụ ịme atụmatụ maka ọdịnihu na ịzọpịa ya bụ ada Carmina, Carmina.
Manolin: Ọ bụ nwanne nwanne Fernando na ọ bụ onye hụrụ ezinụlọ n'anya mgbe niile, yabụ oge ọ bụla o nwetara ohere ọ na Fernando na-akpakọrịta.
Carmine: Ọ bụ ada Carmina na Urbano, nwere ụzọ isi yie nne ya na nwata. Ọ na-ahụkwa Fernando n'anya, mana ndị ezinụlọ ya achọghị ka ya na ya nwee mmekọrịta.
Ọdịdị nke akụkọ ahụ
Akụkọ nke a steepụ nwere a Ọdịdị yiri onwe ya ka a akwụkwọ akụkọ, ebe ị nwere okwu mmeghe, eriri, ma ọ bụ esemokwu; na akụkụ nke ihe si na ya pụta nke, n'otu ụzọ, yiri ka ọ ga-enwe ngwụcha nke ga-emeghachi otu usoro ugboro ugboro maka ndị odide ahụ.
Kpọmkwem, na akụkọ a ị ga-ahụ ihe ndị a:
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ọgbọ mbụ na akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na a na-agwa mbido ndị agwa ya, ụmụaka ndị ahụ pụtara na ndị ga-abụ ndị protagonists mgbe oge gafere.
Ihe eriri, ma ọ bụ esemokwu, bụ akụkụ a na-elebara anya na akwụkwọ akụkọ n'ihi na ọ bụ ebe ihe kachasị dị na ya. Na, na nke a, eriri onwe ya bụ ọgbọ nke abụọ dum ebe ị hụrụ otú ha si ebi ndụ, nkụda mmụọ, iwe, ụgha, wdg.
N'ikpeazụ, njedebe, nke na-emeghe n'ezie ma na-agbaso otu ụkpụrụ ahụ ka ihe niile wee megharịa, Ọ bụ ọgbọ nke atọ, ebe a hụrụ na ụmụaka ga-eme otu ihie ụzọ dị ka nne na nna. Ọbụna ndị a na-agba ha ume maka ihe ha na-eme.
Ihe ọkwa ahụ pụtara
Otu n'ime ihe dị mkpa nke Akụkọ banyere ubube bụ ọkwa ahụ n'onwe ya. Ọ bụ ihe gbasara a unflappable mmewere, nke ahụ dị kwa afọ na ngabiga nke afọ, na ọgbọ, site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ ọ na-anọgide dịka njikọ nke njikọ nke ndị agbata obi niile nke ebe ahụ.
Agbanyeghị, ọ na-egosipụtakwa oge, ebe ọ bụ na na mbido, a na-ahụ steepụ ọhụụ ọhụrụ, nke na-egbukepụ egbukepụ, yana oge ngabiga, na karịa ihe niile na-aga n'ihu n'oké osimiri ịda ogbenye ahụ na enweghị ike ịpụ, ọ bụ rie, ọ na-aka nka, na-agbadakwa.
N'ụzọ dị otú a, Ubube n’onwe ya na-aghọkwa agwa ọzọ nke ahụ dị n'ọgbọ niile ma na-atụgharị uche, na-ada ogbi, ndụ ndị ọzọ.
Okwu Antonio Buero Vallejo kwuru
Ọ bụrụ na ịhụnanya adịghị m akọ, aga m eme ọtụtụ ihe.
Ọ dị mma ịhụ na a ka na-echeta gị.
Emela ngwa ngwa ... Enwere ọtụtụ ihe iji kwuo maka nke ahụ ... ịgbachi nkịtị dịkwa mkpa.
Ahụrụ m gị n'anya nhụjuanya gị na nhụjuanya gị; ị soro gị taa ahụhụ ma ghara iduga gị n’ala ụgha nke ọ someụ.
Ha ekwewo ka ndụ merie ha. Afọ iri atọ agafeela ma gbadata n'ọkwá a ... na-aghọwanye obere na ndị rụrụ arụ kwa ụbọchị. Ma anyi agaghi ekwe ka onodu anyi merie anyi. Ọ bụghị! N'ihi na anyị ga-ahapụ ebe a. Anyị ga na-akwado ibe anyị. Ga-enyere m aka, ịhapụ ụlọ a na-enweghị obi ebere ruo mgbe ebighi ebi, ọgụ ndị a oge niile, nsogbu ndị a. Will ga-enyere m aka, nri? Gwa m ee, biko. Gwa m! (Nkebi ahịrịokwu si n'akwụkwọ ahụ «Akụkọ banyere steepụ»).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Nchịkọta nkenke nke “History of a staircase” by Antonio Buero Vallejo
Aitami zaa meee
Zaghachi Carlos Alonso Pérez
Stephenie Meyer alaghachila. New Twilight Saga akwụkwọ maka August